Xinhua Myanmar - မြန်မာရေလုပ်သားများ ထိုင်းသို့ တရားဝင် စေလွှတ်မည်
ထိုင္းႏိုင္ငံ အလုပ္သမား ၀န္ၾကီး Pol. Gen Adul ႏွင့္ အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈၾကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔ အင္အား ၀န္ၾကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး ဦးသိန္းေဆြတို႔ အစည္းအေ၀းခန္းသို့၀င္ေရာက္လာစဥ္ (ဆင္ဟြာ) Politics, Law & Military
“ရေလုပ်သား ၄၂၀၀၀ လောက် လိုနေတယ်လို့ သိရပါတယ်၊ အဲဒီအတွက် ထိုင်းနိုင်ငံဘက်က ဆောင်ရွက်မယ့် နည်းလမ်း သုံးခု ရှိတယ် ဆိုတာကိုလည်း သိပါတယ်။ ဒီ ရေလုပ်သားတွေကို တရားဝင်လုပ်သားတွေ အဖြစ် လက်ခံနိုင်အောင် ထိုင်း ဥပဒေနဲ့ အညီ ခိုင်မာတဲ့ လုပ်သားတွေ ဖြစ်ဖို့ လိုလားပါတယ်။ အဲဒီအတွက်လည်း ထိုင်းနိုင်ငံနဲ့ ပူးပေါင်းပြီး အမြန်ဆုံး ဆောင်ရွက်သွားမှာ ဖြစ်ပါ တယ်။ ကျွန်တော်တို့ ဘက်ကလည်း ရနောင်းမှာ အလုပ်သမား ပို့ဆောင်ရေး စင်တာတစ်ခု ဖွင့်လှစ်မယ် ပြီးတော့ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်သွားမယ်ဆိုရင် ထိုင်းဘက်ကလည်း အကျိုးရှိမယ်၊ မြန်မာနိုင်ငံလည်း အကျိုးရှိမယ်၊ လုပ်သားတွေလည်း အကျိုးရှိမယ့် လုပ်ငန်းတွေကို မကြာခင် ဖော်ဆောင်နိုင်လိမ့် မယ်လို့ ကျွန်တော် တို့ ယုံကြည်ပါတယ်” ဟု ယနေ့ နံနက် နေပြည်တော် ရုံးအမှတ် (၅၁) တွင် ပြုလုပ် သော မြန်မာရွှေ့ပြောင်းလုပ်သား အခွင့်အရေး ကာကွယ် စောင့်ရှောက်မှု ဆိုင်ရာ အစည်း အဝေး အပြီးတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးက ဖြေကြားခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
ထိုင်းနိုင်ငံ အလုပ်သမား ဝန်ကြီး Pol. Gen Adul နှင့် အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အား ဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးသိန်းဆွေတို့ မီဒီယာသို့ဖြေကြားစဉ် (ဆင်ဟွာ)
ထို့အပြင် ပြီးခဲ့သော ကာလအတွင်းမှာ CI စခန်းများ ဖွင့်ပြီး ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့်အတွက် မြန်မာ နိုင်ငံသား ၁ ဒသမ ၂ သန်းကျော်တို့ ထိုင်းနိုင်ငံမှာ တရားဝင် အလုပ်သမားများ ဖြစ်လာကြောင်း၊ ထိုင်းနိုင်ငံ အလုပ်သမား ဥပဒေနှင့် အညီ အကျိုးခံစားခွင့်တွေ ရရှိခဲ့ကြောင်း၊ နောင်မှာလည်း MoU စနစ်ဖြင့် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ဖို့၊ တရားမဝင် လုပ်သားပို့သူများကို ထိရောက်စွာ အရေးယူနိုင်ဖို့၊ ကိစ္စကြီးငယ် ရှိခဲ့လျှင်လည်း နှစ်နိုင်ငံ ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုကို အခြေခံပြီး ဆောင်ရွက်သွားဖို့ကို ဆွေးနွေး နိုင်ခဲ့ကြောင်း၊ မည်သည့်ကိစ္စကို မဆို ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်လျှင် အောင်မြင်မည်ဟု ယုံကြည်ကြောင်း လည်း ၎င်းက ပြောခဲ့သည်။
ရွှေ့ပြောင်း လုပ်သားများ အရေး အစည်းအဝေး ကျင်းပနေစဉ် (ဆင်ဟွာ)
ထိုင်းနိုင်ငံ အလုပ်သမားဝန်ကြီး Pol. Gen Adul က “ကျွန်တော်တို့ အစိုးရအနေနဲ့ အထူးသဖြင့် ရေလုပ်ငန်းမှာ လုပ်သား လိုအပ်ချက်ရှိနေပါတယ်၊ လုပ်သား ခြောက်သောင်းလောက် လိုအပ်နေလို့ လာရောက် အကူအညီတောင်း တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအလုပ်သမားတွေကို MoU စနစ်နဲ့ခေါ်ယူနိုင် အောင် ဆောင်ရွက်ဖို့ စီစဉ်လျက်ရှိပါတယ်။ သူတို့ကို တရားဥပဒေအတိုင်း သတ်မှတ်ထားတဲ့ လုပ်အားခ၊ အခွင့်အရေးနဲ့ဥပဒေအရ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုတွေ ရရှိနိုင်ဖို့လည်း ဆောင်ရွက်နေ ပါတယ်” ဟု ဖြေကြားခဲ့သည်။
ယနေ့ အစည်းအဝေးတွင် နှစ်နိုင်ငံ ဆက်ဆံရေးနှင့် ပူးပေါင်းဆေင်ရွက်မှုကိုမြှင့်တင်ရေး၊ ထိုင်းနိုင်ငံ ရောက် မြန်မာလုပ်သားများ၏ အခွင့်အရေး ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုများ မြှင့်တင်ရေး၊ MoU စနစ်ဖြင့် စေလွှတ်သည့် လုပ်ငန်းစဉ် အောင်မြင်မှုကို ဆက်လက် ထိန်းသိမ်းရေး၊ မြန်မာရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားများ ၏ မိသားစုထံ လွှဲပို့ငွေများ တရားဝင် လွှဲပို့နိုင်ရန် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရေး၊ ထိုင်းနိုင်ငံရောက် ယာယီလုပ်သားများနှင့် အိမ်အကူလုပ်သားများကို ကူညီစောင့်ရှောက်ရေး၊ မိခင်နိုင်ငံသို့ ပြန်လည် ပို့ဆောင်မည့် မြန်မာ လုပ်သားများ ၇ှိပါက နှစ်နိုင်ငံ အစိုးရအကြား သတ်မှတ်နေရာများတွင် တရားဝင် ပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးရေး၊ မြန်မာရေလုပ်သားများကို MoU စနစ်ဖြင့် စေလွှတ်ရေး များလည်းပါဝင်ကြောင်း သိရသည်။ (Xinhua)
Previous Article နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်နှင့် လွတ်လပ်သော စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မရှင်တို့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေး
Next Article ချင်းတွင်းမြစ်ဝှမ်း ရေရှည်တည်တံ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရေးအတွက် နားလည်မှုစာချွန်လွှာလက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်ရန် ဆောင်ရွက်